Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba zaseYurophu » Ixesha elitsha le-ski laseYurophu lijinga emngciphekweni
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iindaba • abantu • Resorts • Xanduva • Safety • Sports • Tourism • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Ukunyuka okuqhelekileyo kwemfuno kuya kuba nefuthe njengoko ubhubhani, kwakhona, ubuyisela intloko kwiimarike ezinkulu ze-ski kunye neendawo ekuya kuzo.
Imfuno yohambo lokutyibiliza kwi-ski eYurophu kulindeleke ukuba ithathe ukubetha kulo nyaka ngenxa yokunyuka kwamatyala e-COVID-19 kunye nokucutha kweenyawo okunokwenzeka kwiindawo ezinkulu zokutyibiliza ekuqaleni kukaDisemba.
UDisemba udla ngokubona abakhenkethi abasakhulayo be-skiing besiya iYurophu, ephelisa ukucotha kohambo lwelizwekazi emva kwehlobo. Umzekelo, iYurophu yabona uhambo lwasekhaya kunye nolwangaphandle lonyuka nge-38.3% ukusuka ngoNovemba ukuya kuDisemba ngo-2019 - kunyaka ophelileyo awuchatshazelwanga ngubhubhane.
Oku kunyuka kunzima kwemfuno yeeholide ngoDisemba kudla ngokudlalela ezandleni zeendawo zokutyibilika zeski zaseYurophu, uninzi lwazo lubeka uDisemba njengesiqalo sexesha elisemthethweni lokutyibiliza ekhephini. Nangona kunjalo, ukunyuka okuqhelekileyo kwemfuno kuya kuba nefuthe njengoko ubhubhani, kwakhona, ubuyisela intloko kwiimarike ezinkulu zomthombo we-ski kunye neendawo.
Ngokophando lwamva nje, i-25% yabaphenduli baseYurophu bathi 'basakhathazeke kakhulu' malunga nobhubhani we-COVID-19. Ipesenti ebaluleke kangako ayihambi kakuhle, kwaye inkampani ilindele ukuba abantu abaninzi baseYurophu bamise okanye barhoxise izicwangciso zeholide ukuba babona usulelo lwentsholongwane luqala ukwanda kwakhona.
I-Skiing hotspots efana neFransi, i-Italiya kunye neSwitzerland iya koyika kakhulu, kwaye abaninzi baxhomekeke kwezi nyanga ezizayo ukulungisa ezinye zeelahleko ezifunyenwe kwiisizini ezimbini ezidlulileyo. iYurophu, kwakhona, izibhaqa sele isembindini wobhubhane - kanye njengokuba ixesha lokutyibiliza liqala ukuba namandla.
Imeko ye-COVID-19 kwi Jemani inokuba yinto ephambili yokwenza isigqibo kwimpumelelo yexesha elizayo le-ski yaseYurophu. IJamani inabatyibilizi kakhulu kunalo naliphi na elinye ilizwe laseYurophu, nto leyo eyenza lo mthombo wentengiso ubaluleke kakhulu kwiindawo zokutyibiliza ekhephini. Ukongeza, iJamani yayiyeyesithathu inkcitho ephezulu yomthombo wentengiso kwihlabathi liphela ngo-2020, ebonisa amandla ayo enkcitho kunye nokuzimisela ukuqhubeka nohambo lwamazwe aphesheya ngexesha lo bhubhani.
Njengoko bekuxeliwe nge-24 kaNovemba ka-2021, inani losulelo olutsha lwe-COVID-19 olubhalisiweyo ngosuku olunye lufikelele kwinqanaba eliphezulu Jemani . Ukongeza, izehlo zeentsuku ezisixhenxe kwilizwe lonke zinyuke ngaphezu kwama-400. La manani othusayo Jemani iya kudala isizathu sokuxhalaba phakathi kweendawo zokutyibilika ekhephini zaseYurophu njengoko izithintelo zohambo ziya kulandela, idala impembelelo ebalulekileyo ekuveliseni ingeniso yeendawo ekuchithelwa kuzo iiholide namanye amashishini aqhagamshelwe kukhenketho lokutyibiliza ekhephini.